Tourmaline ဒြပ်စင်နှင့်အတူတစ်ဦးပုံဆောင်ခဲဘိုရွန် silicates ဓာတ်သတ္တုဖြစ်ပါသည်
Tags: စိမ်းလန်းသော, Tourmaline, ရက်စက်တယ်
Verdelite ကျောက်မျက်သည်စိမ်းလန်းသောခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နား၊ ကွင်း၊ လည်ဆွဲ၊ လက်ကောက်သို့မဟုတ်ဆွဲကြိုးကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဝတ်ရတနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပါသည်။ verdelite ...
Tags: Schorl, Tourmaline
Tourmaline အမျိုးအစားတွင်အများဆုံးပါဝင်သော schorl သည်ဆိုဒီယမ်သံအုပ်စုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 95% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည် ...
Tags: Indicolite, Tourmaline
Indicolite blue color tourmaline stone meaning and price. Indicolite isarare light blue to bluish green color variety of tourmaline group....
အရောင်တူသောကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်သို့မဟုတ် elbaite ကျောက်၊ လည်ဆွဲ၊ လက်စွပ်၊ ပုတီး၊ လက်ကောက်၊ Tourmaline သည်ကြည်လင်သော ...
Tags: ကြောင်ရဲ့မျက်စိ, Tourmaline
Tourmaline သည်ပုံဆောင်ခဲ Boron silikat mineral ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယံ, သံ, မဂ္ဂနီစီယမ်, ဆိုဒီယမ်, လီသီယမ်, ဒါမှမဟုတ်ပိုတက်စီယမ်အဖြစ်ဒြပ်စင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ tourmaline တစ် ဦး က Semi- အဖိုးတန် ...
Tags: Paraiba, Tourmaline
Tourmaline အရောင်အားလုံးနီးပါးကိုဘရာဇီးတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဘရာဇီးပြည်နယ် Minas Gerais နှင့် Bahia ပြည်နယ်များတွင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ...
Tags: Rubellite, Tourmaline
Rubellite သည် Tourmaline အုပ်စုမှအနီရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင် - နီသော boron silikat elbaite မျိုးစုံဖြစ်သည်။ Elbaite Elbaite သည်ဆိုဒီယမ်၊ လီသီယမ်၊ လူမီနီယမ်ဘိုရွန်လည်းဖြစ်သည်။
Tags: Tourmaline, ဖရဲသီး
ဖရဲသီး Tourmaline သည်ပုံဆောင်ခဲ Boron silikat mineral ဖြစ်သည်။ အချို့သောသဲလွန်စဒြပ်စင်များမှာအလူမီနီယမ်၊ သံ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ အမျိုးအစား ...
Black က tourmaline
Tags: အနက်ရောင်, Tourmaline
Raw အနက်ရောင် Tourmaline ကြည်လင်သောကျောက်အဓိပ္ပာယ်ကို။ Tourmaline (Black Tourmaline) သည်ပုံဆောင်ခဲဘိုရွန်စီလိတ်သတ္တုဓာတ်ဖြစ်သည်။ အချို့သောသဲလွန်စဒြပ်စင်များသည်လူမီနီယမ်၊ သံ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊
အရောင်ပြောင်းလဲမှု chrome Tourmaline
Tags: Chrome ကို, အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း, Tourmaline
အရောင်ပြောင်းလဲမှု chrome tourmaline Tourmaline သည်အလူမီနီယမ်၊ သံ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ လီသီယမ်စသည့်ဒြပ်စင်များဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံဆောင်ခဲဘိုရွန် silikat mineral ဖြစ်သည်။